Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Muzvinabhizimisi wekuChina muTonga anoshuma nezvenyika yechitsuwa zvino
Muzvinabhizimisi wekuChina muTonga anoshuma nezvenyika yechitsuwa zvino
Muzvinabhizimisi wekuChina Yu Hongtao ari kuTonga. Panguva yehurukuro yake neCGTN, akati huruva iri pese pachitsuwa mushure mekuputika kwegomo.
"Zvandaona kusvika zvino ndezvekuti munhu wese ane chekuita nekununura kwechimbichimbi uye mabasa ekuyamura njodzi," akadaro Yu. “Anenge munhu wese akapfeka mask. Madota anoputika ari mumigwagwa nokuti madota acho akatora maawa akawanda. Ivhu rafukidzwa nemadota, kusanganisira zvinomera nedzimba dzevanhu.”
“Vamwe vazvipiri vanga vachichenesa migwagwa, asi vasati vapinda musango. Vanhu vachangobva kuchenesa migwagwa,” vakadaro.
Panyaya yemararamiro anosanganisira mvura, magetsi nechikafu muTonga, maYu zvinhu hazvisati zvadzokera pakare, asi kune dzimwe nzvimbo kwave nekuvandudzwa.
Vati magetsi akadzoserwa munzvimbo dzakawanda mukati mezuva rimwe chete mushure mekuputika kwabvisa magetsi. Uyezve, mambakwedza, zuva rekuputika, vanhu vose vakaunganidza zvinhu.
“Ini pachangu ndakaunganidza mvura uyezve zvokudya nemvura yakawanda,” akadaro.
“Tine zvekushandisa zvakakwana pano. Hakuchina mvura yemubhodhoro pazvitoro zvino, asi zvimwe zvekushandisa zvichiri kuwanikwa."
Miriwo haipo pari zvino. Yu akati shamwari yake inoshanda mune zvekurima yakamuudza kuti vanhu pachitsuwa ichi havazove nemuriwo mutsva kwenguva inopfuura mwedzi. Kana ari michero akati, “Pachitsuwa apa hapana zvakawanda, kutanga, manwiwa chete. Asi kunyangwe izvi zvave kushoma izvozvi. "
"Handifunge kuti hupenyu hwadzokera kune zvakajairika," Yu akaudza CGTN.
Vati mutevedzeri wemutungamiri wenyika azivisa mamiriro enjodzi, uye maTonga ari kubatana nekubatsira njodzi uye kuchenesa madota anoputika mumigwagwa.
“Kana dzikasacheneswa, dzinobhururuka dzichidzokera mudenga kana motokari dzapfuura, uye dzinomhara pamatenga edzimba,” akadaro.
“Mvura yekunwa muTonga inobva kunaya. Imba yega yega ine mudziyo wekuchekesa mvura inonaya pamatenga edzimba, saka tinofanira kuona kuti madota ese acheneswa.”
Vanachiremba Vanovhiya VeCHOP Vanoparadzanisa Mapatya Akabatana Ava Kumba
Runako rweArmani runozivisa Huso hutsva hwekunaka
Hutano husina kunaka hwemukanwa hwakabatana nezvirwere zvakakomba
Mutungamiriri Mukuru Schulte's Speech yeFraport AGM Yakatsikiswa mu...
eTurboNews anobatana neSosaiti yeProfessional...
Carnival Cruise Line inopwanya pachiteshi chitsva chechikepe ...
New Relaxed CDC COVID Guidelines Mibvunzo neMhinduro
Chirevo neUkraine International Airlines
Chikamu Chitsva muKliniki Kuedzwa kweKnee Osteoarthritis...
Nyika yeHyatt: 100 nyowani-inosanganisirwa nzvimbo dzekutandarira dzakatsvuka ...